Myanmar Cyber Security Challenge — Steemit
Myanmar Cyber Security Challenge
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၁)ရက်နေ့တွင် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Myanmar Cyber Security Challenge (၂၀၁၉) (အလွတ်တန်းအဆင့်) ပြိုင်ပွဲတွင် ကဏ္ဍအလိုက် မေးခွန်းထုတ်မည့်သူများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
(၁) Web (ဦးမင်းကိုကို၊ Creatigon)
(၂) Binary Exploit (ဦးမင်းကိုကို၊ Creatigon)
(၃) Cryptography (ဦးရဲသူရသက်၊ Kernellix)
(၄) Forensics (ဦးရဲရင့်မင်းသူထွဋ်၊ DBS)
(၅) Reverse Engineering (ဦးမျိုးမြင့်ထိုက်၊ mmCERT/cc)
ပြိုင်ပွဲလျှောက်လွှာပိတ်ရက်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၆)ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း (၂၀)ကျော်ပါက (၃-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် Forensics/Reverse Engineering/Cryptography
နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများကို အွန်လိုင်း၌ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်အများဆုံး အသင်း(၂၀)ကို နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ link တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့ထက် နောက်မကျစေဘဲ အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာန၊ S12 Building၊ ဇမ္ဗူကျက်သရေလမ်း၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပေးပို့၍ ဖြစ်စေ၊ [email protected] သို့ အီးမေးလ် ဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲလျှောက်လွှာပိတ်ရက်မှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၆)ရက်နေ့ဖြစ်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းပေါင်း (၂၀)ကျော်ပါက (၃-၈-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် Forensics/Reverse Engineering/Cryptography
နှင့် သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများကို အွန်လိုင်း၌ ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်အများဆုံး အသင်း(၂၀)ကို နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲသို့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြိုင်ပွဲနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါ link တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာများကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၆) ရက်နေ့ထက် နောက်မကျစေဘဲ အမျိုးသားဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဗဟိုဌာန၊ S12 Building၊ ဇမ္ဗူကျက်သရေလမ်း၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်သို့ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ပေးပို့၍ ဖြစ်စေ၊ [email protected] သို့ အီးမေးလ် ဖြင့်ဖြစ်စေ ပေးပို့နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have receiveda0.83% upvote from us for your 95 Partiko Points! Together, let's change the world!